DVD Saudade do Futuro - MC sy C. Paes
Horonantsarin'i Marie-Clémence & Cesar Paes ho fampahafantarana an'i Sao Paulo sy ireo poetan'ny lalany, mpifindra monina Nordeste brezilianina, izay tsy mena-maso eo anatrehan'ny mpanao rapp tandrefana.
Horonantsarin'i Marie-Clémence et Cesar Paes
Hatreny amin'ireny trano mijoalajoala mahafanina mitsangana ireny ka hatrany an-davaky ny metro, hatramin'ny fitakiana ara-pÃ´litika na koa bal pepilera, na mpanao gazety izy, na ben'ny tanÃ na na mpitondra fiarakaretsaka, ireo mpifindra monina Nordestinina no mitondra antsika ao amin' ny SÃ£o Paulo-"ny", anisan'ny tanÃ n-dehibe ngeza indrindra eran-tany, sy ny mponina 16 tapitrisa ao aminy. Tonga tao SÃ£o Paulo izy ireo, any atsimo, satria nitsoaka ny haintany any Nordeste na mety ho nitady harena koa. Na tonga hiasa fotsiny satria any "atsimo manjopiaka" no iandronan'ny asa, ny vola sy ny orinasa any Brezily. Araham-peon-gitara na amponga kely, ireo "repentistas" nordestinina ireo, toa zary mpanao gazety mitantara ny fiainana isan'andro, no mamorona rima sy miantsa tononkalo momba izay fiainana hitan'ny masony sy manodidina azy eo no ho eo. Mindrana ny mason'ny Nordestinina i Saudade do Futuro hijereny an'i SÃ£o Paulo, ary mindrana ny feony hihirany ny tanÃ n-dehibe !
Rendez-vous sur le site de Saudade do Futuro : www.saudadedofuturo.com